Agence France-Presse | Freedom News Group
never again be the same
Posts tagged ‘Agence France-Presse’
7 Comments	ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ရာထူးက နှုတ်ထွက်ပြီ
“အာဏာရှင်တွေ ဟာ သူတို့ ဘယ်လောက်ပိုင် သလဲ ဆိုတာ သူတို့ ပြည်သူ နဲ့ ကမ္ဘာ ကို ပြချင်ကြတယ်…
နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီ စိတ်ကြောင့် ပဲ သူတို့ ဂွမ်းသွားရတာ” (Bernard Henri Levy ခေတ်သစ် ပြင်သစ်
တွေး ခေါ် ပညာရှင်…လစ်ဗျား လူထု အုံကြွမှု ကို လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန် မှု အဖြစ် အသွင် ပြောင်းပေး ခဲ့သူ)
၁၉၉၂ ခုနှစ် တွင် နိုင်ငံ တော် အာဏာ ကို ရယူခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေသည် မြန်မာ စစ်တပ် ၏ အကြီး အကဲ အဖြစ် နှင့်
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် အဖြစ် မှ ယနေ့နှုတ်ထွက် သွား ပြီ ဟု Freedom News Group မှ သတင်း ရရှိသည်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Mar 25
ယီမင် သမ္မတက အာဏာလွှဲပြောင်း ပေးမည့် အစီအစဉ် ကို အတိုက်အခံ တို့ ပယ်ချ
” Military rule in Arab countries was outdated” General Ali Mohsen who join Yemeni Protestors ယီမင် သမ္မတ အလီ အဗ္ဗဒူလာ ဆာလေး က ယခုနှစ်ကုန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်း ပချိန် ရောက်လျှင်
နှုတ်ထွက် ပေးပြီး အာဏာလွှဲ ပြောင်း ပေး မည် ဆိုသည့် ကမ်းလှမ်း ချက် ကို အတိုက် အခံ တို့ က
ပယ်ချလိုက် ပြီး ယနေ့ သောကြောနေ့ တွင် စစ်တပ် နှင့် ပြည်သူများက သမ္မတ နန်းတော် ကို ၀ိုင်း ၍ ဆန္ဒပြ မည် ဟု အယ်(လ)ဂျာဇီးယား သတင်း ဌာန တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Mar 21
7 Comments	ယီမင် စစ်တပ် ဆန္ဒပြသူများ နှင့် ပူးပေါင်း
ယီမင် ကာကွယ်ရေး စစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဆန္ဒပြသူများ နှင့် ပူးပေါင်း
ဆန္ဒပြသူများ နှင့် ပူးပေါင်းသွား သည့် တပ် မများ က အာဏာရှင် သမ္မတ ဆာလေး ၏ နန်း
တော် ကို ၀ိုင်းရန် ခရီးပြင်း ချီတက်
အမေရိကန် ရေတပ် သင်္ဘော တစ် စီး ဧဒင် ပင်လယ်ကွေ့ အနီး သို့ ရောက်ရှိ
ကျွန်တော် ဟာ ကျွန်တော့် ပြည်သူ တွေ ကို အကာအကွယ် ပေး ဖို့ စစ်တပ် ထဲ ၀င်ရောက်ခြင်း
ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော့် ပြည်သူ ကို အကာ အကွယ်ပေး ဖို့အချိန် ရောက်ပါ ပြီ
Brigadier Ali Mohsen Saleh, head of the North Western Military Zone
ယီမင် စစ်တပ် ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် ကြီး အလီ မိုဟန် အယ် အာမာ က ဆန္ဒပြသူများ နှင့် ပူးပေါင်းသွားစဉ် Updated ဒီမိုကရေစီ လိုလားသည့် ယီမင် စစ်တပ် က ဆန္ဒပြသူများ နှင့် ပူးပေါင်းကာ ယီမင် နိုင်ငံ၏
မြို့ ငယ် များ ကို ထိန်းချုပ် လိုက်သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။ မော်ရိုကို နိုင်ငံ တွင် ယနေ့ ဆန
ပြမှု များ ဖြစ်ပွားနေပြီး ၊ ဆီးရီးယား နိုင်ငံ တွင် ဆန္ဒပြသူများ ကို ဖြိုခွဲရာ တစ်ဦး သေဆုံး ပြီး
ဘာရိန်း တွင် ဆန္ဒပြသူများက အင်အားကောင်းသော ဆန္ဒပြ ပွဲ တစ်ခု ဖြစ်ပေါ် ရန် ဆော်
သြနေကြသည်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Mar 20
24 Comments	လစ်ဗျား နိုင်ငံ ကို လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု စတင်
Operation Odyssey Dawn, Operation Ellamy ,Operation Harmatton LIBYA 101 LIVE
ဗြိတိသျှ တိုက်လေယာဉ်များ သည် မိုင် ၃၀၀၀ ကျော်ခရီး ကို ဖြတ်သန်းပြီး မောင် နှင် တိုက်ခိုက်
ရာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဖောက်ကလန် စစ်ပွဲ ပြီးနောက် ဒုတိယမြောက် စစ်ဆင် ရေး နယ် အရှည်လျှား
ဆုံး ဟု ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး လီယန် ဖောက်(စ)က ပြော
ဒိန်းမတ် နှင့် စပိန် တိုက်လေယာဉ် များ ကို တူနီးရှား နယ်စပ် အနီးရှိ လစ်ဗျား လေဆိပ် ပြေးလမ်း
များ ကို ဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့
လစ်ဗျား ပြည်သူများ ရန်လိုသည့် ခရူးဆိတ်စစ်သည် များ ကို တိုက်ခိုက် နိုင်ရန် လက်နက် တိုက်များ
ကို ကဒါဖီ ထပ်မံ ဖွင့်ပေး
ပထမနေ့ ထိတွေ့ မှု တွင် ကဒါဖီ ၏ မွေးစား သမီး တစ်ဦး အပါအ၀င် ၁၀၀ ကျော် သေဆုံး
အီရတ် စစ်ပွဲ ရှစ် နှစ်မြောက်နေ့ တွင် လစ်ဗျား အာဏာရှင် အစိုးရ ၏ စစ်စခန်းများ ကို
မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့ က ဒုတိယနေ့ အဖြစ် ဆက်တိုက်မည် လစ်ဗျား လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး ဌာနချုပ် ကို တိုမာဟောခ် ဒုံးးကျဉ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်နေ စဉ်
လစ်ဗျား နိုင်ငံ စံတော်ချိန် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ သတင်းများ
ကဒါဖီ ၏ သစ္စာခံများက ထရီပိုလီ ရှိ ကဒါဖီ ၏နေအိမ် ကို မဟာမိတ် စစ်လေယာဉ်များ ဗုံးမကြဲ နိုင်ရန် လူသား ဒိုင်း အဖြစ် အကာအကွယ်ပေးထားသည် ဘန်ဂါဇီ မှ ကဒါဖီ သစ္စာခံ တပ် များ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာ နောက်ထပ် တိုမာဟောခ် ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျဉ် အလုံး ၈၀၀ ကျော် ထပ်သုံး၍ လေကြောင်းရန်
ကာကွယ်ရေးစနစ်များ ကို ဖျက်ဆီးမည် (ပင်တဂွန်)
မစ်ဆူရာ ရှိ လစ်ဗျား စစ် တက္ကသိုလ် ကို ဗြိတိသျှ လေတပ် က ဗုံးကြဲ ဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ ကဒါဖီ ၏ တပ်ဖွဲ့ များ က အယ်(လ)ဂျာဇီးယား သတင်းထောက်များ ကိုဖမ်းဆီး
B2Stealth ကိုယ်ပျောက် ဗုံးကြဲ လေယာဉ် ဖြင့် ထရီ ပိုလီ ရှိ စစ်ရေး ပစ်မှတ် များ ကို ဗုံး အလုံး ၄၀ ကျော်ကြဲ
ဗြိတိသျှ တိုက်လေယာဉ်များ ဖြစ်သည့် တိုင်းဖွန်း၊ဟာရီကိန်း နှင့် တော်နေဒိုး လေယာဉ်များ လစ်ဗျား
နိုင်ငံ ထဲ ရှိ ကဒါဖီ ၏ လေကြောင်းကာကွယ်ရေး စနစ်များ ကို နံနက် အရုဏ် တက်ချိန်တွင် စတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်
ပထမ အသုတ် ပစ်လွှတ် သည့် တိုမာဟောခ် ဒုံးကျဉ်များ ကြောင့် ထရီပိုလီ ရှိ လေကြောင်း
THIS IS A BREAKING NEWS UPDATE. Check back soon for further information. FNG ‘s earlier story is below.
လစ်ဗျား လေယာဉ် ကွင်း များ ကို ဗုံးကြဲ ခဲ့သည့် ဘီ ၅၂ Stealth တိုက်လေယာဉ်များ
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Want Burma info in your inbox each morning?
Get the daily news enter your mail Join 1,703 other followers
Contact Us. info@freedomnewsgroup.com	ဒီတစ်ပတ် အတွက် ရောင်းကောင်း လူကြိုက်များ စာအုပ် Generated by IJG JPEG Library
Myanmar News in EnglishAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.အသက် အရွယ် အိုမင်း ရင့် ရော် မှု ကို တားဆီး နိုင်တဲ့ စားဖွယ်တွေ Health
အသက် အရွယ် အိုမင်း ရင့် ရော် မှု ကို တားဆီး နိုင်တဲ့ စားဖွယ်တွေ Follow Freedom News Group on WordPress.com
Dining & Wine Discover wines from around the world
Wild (2014)	In Search of Freedom Search
Interior Design	Contemporary Dining Room by Chicago Interior Designers & Decorators Michael Abrams Limited
သီးခြား ကဏ္ဍ သီးခြား ကဏ္ဍ Select Category
Hot On Web | FNG Life Style and Sex From around the web
InStyle Weddings George Clooney and Amal Alamuddin's Wedding Photos
FNG Entertainment Largest Movie Theater Companies Drop 'The Interview'
FNG Facebook Page	FNG Facebook Page
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,728,959 hits
FNG’s News in Brief on Twitter
Missy Elliott ‘steals’ Super Bowl halftime show from Katy Perry link.kfor.com/1z3OAhd via @kfor 1 year ago
RT @Vpedrosa: More photos from Mingyan #Myanmar of police blocking the road where students are to arrive soon http://t.co/X8HB64jvMq 1 year ago
RT @CNNMoney: Apple sold 30,000 iPhones every hour on avg, leading to to best quarter in corporate history cnnmon.ie/1zVyKGU http://t.… 1 year ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် FNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month
December 2015 November 2015 October 2015 August 2015 July 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW	FNG LATE NIGHT SHOW
FNG RSS RSS - Posts RSS - Comments